Haweeney 40 jir ah oo dhashay 42 carruur ah! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Haweeney 40 jir ah oo dhashay 42 carruur ah!
Haweeney 40 jir ah oo dhashay 42 carruur ah!
Mariam Nabatanzi iyo qaar ka mid ah carruurteeda
Uganda (Halqaran.com) – Mariam Nabatanzi oo ah haweeney 40 jir ah kuna nool degmada Mukono waxaa la sheegay in ay tahay haweeneyda ugu dhalmada badan, kaddib markii lasoo weriyay in ay dhashay carruur gaareysa 42.
Dadka deegaankeeda waxay ugu naaneysaan “ Hooyada mataanaleyda ah.” Carruurta ay dhashay oo ah 42 carruur hadda waxaa la nool 38 kamid ah oo badankooda ay kula nool yihiin gurigeeda.
Haweeneydaan oo keli u nool ah inkastoo qoys ballaaran ay mas’uul ka tahay haddana waxay awoodi kartaa in ay afkooda wax ku rido oo aysan qadin.
Mariam Nabatanzi ayaa la sheegay in la guursaday ayadoo 12 jir ah. Haweeneydaan ayaa sheegtay in marwalba ay jecleyd in ay dhasho 6 carruur ah, balse markii ay tiradu mareysay 18 carruur ah waxay go’aansatay in ay iska joojiso dhalmada waxaase loo sheegay in tallaab walba oo looga joojinayo dhalmada badan ay halis galin karto nafsadeeda.
Mariam ayaa dhalmadeeda waxay soo afjartay sanadkii 2016-kii markaas oo ay dhashay dhallaankeedii ugu dambeeyay.
Dhashay 42 carrur ah
Haweeney 40 jir ah